စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းများ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ရောင်းချသည့် နှုန်းအတိုင်း ရောင်းချနိုင်ရန် ဆော - Yangon Media Group
စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းများ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ရောင်းချသည့် နှုန်းအတိုင်း ရောင်းချနိုင်ရန် ဆော
လက်ရှိရောင်းချနေသည့် ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီများ၏ ဈေးနှုန်းကို စင်ကာပူနိုင်ငံမှ စက်သုံးဆီ အရည်အသွေး၊ ဈေးနှုန်းများအတိုင်း ရောင်းချသွားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီ တင်သွင်း ရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းမှသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ စသည့်နိုင်ငံများမှ တင်ပို့သည့် စက်သုံးဆီများအား စင်ကာပူနိုင်ငံ မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူရသဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင် စရိတ်ကုန်ကျမှုများကြောင့် ကမ္ဘာ့ပေါက်ဈေး နှင့် ဈေးနှုန်းကွာဟမှုများရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်က ”စက်သုံးဆီတွေက စင်ကာပူနိုင်ငံကနေ ဝယ်ရပါတယ်။ နောက်သူ့နိုင်ငံကနေ ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ ဆီတော် တော်များများက သူ့နိုင်ငံကချက်လုပ်တဲ့ဆီ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေကလာတဲ့ဆီတွေ သူ့နေရာမှာ ဈေးကွက်လာဖြစ်ပြီးတော့ ရောင်း နေတဲ့ဆီတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ ဆီတင်တဲ့သင်္ဘောတွေဟာ စင်ကာပူမှာချ၊ သိုလှောင်ပြီးမှ ဒီကိုလာမယ့်အစား တိုက်ရိုက် လာမယ်ဆိုရင် စင်ကာပူမှာ ရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းနိုင်မည်ဆိုလျှင် စရိတ်စကများစွာ သက်သာသွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့တင်သွင်းရာတွင်လည်း လက်ရှိတင်သွင်း နေသော တန်ချိန်တစ်သောင်းခွဲသင်္ဘောများမှ တန်ချိန်သုံးသောင်းရှိသည့်သင်္ဘောများနှင့်တင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယခင်က ရေနံတင်သွင်းရာတွင် တစ်လတန်ချိန် ငါးထောင်မှ လက်ရှိတွင် တန်ချိန် တစ်သောင်းခွဲသင်္ဘောများနှင့် သွင်းနေသော ကြောင့် ရေနံတစ်စည်လျှင် သယ်ယူစရိတ် လေးဒေါ်လာမှ ၂ ဒသမ ၅ဒေါ်လာ သယ်ယူ စရိတ်ကုန်ကျတော့သည်ဖြစ်ရာ တစ်လအတွက် တန်ချိန် လေးသိန်း တင်သွင်းရသောကြောင့် ဒေါ်လာ ငါးသန်းခန့် သယ်ယူစရိတ်ကုန်ကျ လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မကြာမီတွင် ရေနံထွက်သည့်နိုင်ငံများမှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းပြီး တန်ချိန်သုံးသောင်း သင်္ဘောများနှင့် တင်သွင်းမည်ဆိုပါက လက်ရှိ ကုန်ကျနေသည့် ရေနံတစ်စည် နှစ်ဒေါ်လာခွဲမှ ထပ်မံလျော့နည်းသွားပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ဈေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချနိုင်မည်ဟု တွက်ဆထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုး မင်းသိန်းကလည်း လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ စက်သုံးဆီဈေးသည် နိုင်ငံတကာပေါက်ဈေးထက် ဈေးများနေပြီး ဈေးနှုန်း လျှော့ချရန် ယခုနှစ်အတွင်း ရည်မှန်းထားကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ လူငယ်များ စုစည်း၍ လူငယ်ရေးရာ မူဝါဒ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး မ?
ဆယ်တန်း ဘော်ဒါဆောင် တစ်ခုတွင် လက်လုပ်မိုင်း တစ်လုံး ပေါက်ကွဲပြီး ခြောက်လုံး ထပ်မံ ရှာဖွေတေ?
ငွေရှိသော်လည်း မြေမရသဖြင့် အာမခံလုပ်သားများအတွက် အိမ်ရာမဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းဟုဆို
ဗြိတိန်တွင် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံ ပေါက်ကွဲ၊ တစ်ဦး သေဆုံး